Maxaad ka taqaanaa kooxda uu taageero Donald Trump?
Wednesday November 28, 2018 - 22:02:04 in Wararka by Mogadishu Times
Madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump ayaa ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee xiiseeya ciyaarta kubadda cagta. Ma ahan mid qarsada jaceylka iyo taageerada uu u haayo ciyaarta kubadda cagta, waxaana horraanba uu ka dhawaajiyay naadigaas.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump ayaa ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee xiiseeya ciyaarta kubadda cagta. Ma ahan mid qarsada jaceylka iyo taageerada uu u haayo ciyaarta kubadda cagta, waxaana horraanba uu ka dhawaajiyay naadigaas. Madaxweyne Trump oo ah shaqsi si qoto dheer u quud-darreeya qaybo kala duwan oo sports-ka ka mid ah ayaa si gaar ah u xiiseeya kubadda cagta, gaar ahaan qaaradda Europe.
Trump ayaa bannaanka soo dhigay taageerada uu ugu sacab tumo kooxda kubadda cagta ee Arsenal.
Waxaa si aad ah loo xasuustaa in inta uusan noqonin madaxweynaha dalka USA uu ka dalbaday madaxda Arsenal inay shaqada ka ceyriyaan Macallin Arsene Wenger oo xilligaas maamule ka ahaa Emirates kooxda ka dhisan.
Waxaa uu 72-jirkan ballan qaaday xilligaas inuu bixin doono mushaarka macallinka xiga ee Gunners muddo 50 sanadood ah.